RASMI: Maamulka Premier League oo ansixiyey xeerka bedellada horyaalka & Tirada xiddigaha kursiga keydka soo fariisanaya – Gool FM
(London) 04 Juun 2020. Inta ka dhiman xilli ciyaareedka 2019-20 waxaa maamulka Premier League ay wax ka bedeleen xeerka bedellada ciyaartoyda, waxaana ay kordhiyeen xiddigaha kursiga keydka soo fariisan doona.
Maamulka Premier League waxay xaqiijiyeen in bedellada ay noqon doonaan shan bedel kulankiiba, isla markaana ay kursiga keydka soo fariisan doonaan sagaal xiddig.
Bayaan ka soo baxay Maamulka horyaalka Premier League ayaa u dhignaa:-
Shuraakada Premier League waxay maanta isku raaceen in si ku meel gaar ah wax looga bedelo xeerarka la xiriira bedellada ciyaartoyda.
Inta ka dhiman xilli ciyaareedkan 2019-20 tirada bedellada kulankiiba waxaa koox walba loo ogol yahay inay isticmaali karto shan bedel, halka markii hore uu ka ahaa saddex bedel oo qura.
Xeerkan ku meel gaarka ah waxaa bishii la soo dhaafay aqbalay Guddiga xiriirka kubadda cagta caalamiga ah ee la yiraahdo International Football Association Board (IFAB).
Sidoo kale Shuraakada Premier League waxay kooxaha u ogolaadeen inay kordhisan karaan tirada xiddigaha kursiga keydka soo fariisanaya si ay u helaan tiro badan oo bedello ah inta ka dhiman xilli ciyaareedka, waxaana loo ogolaaday ugu badnaan sagaal ciyaaryahan, halka markii hore ay ka ahaayeen toddobo xiddig.